Lozam-Piaramanidina Tany Nepal : Maty Daholo ireo Mpandeha 18 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2014 2:56 GMT
Twin Otter DH-6 De Havilland Canada an'ny fitaterana an'habakabaka Nepale, mitovy amin'ilay faramanidina tra-doza. Sary nalefan'i Soshin Drechsler avy ao amin'ny Wikimedia Commons. CC BY-SA 3.0
Fiaramanidina Twin Otter iray tra-pahavoazana no nianjera tany amin'ny alan'i Masine any afovoany andrefan'i Nepal tamin'ny 16 Febroary 2014 ary nahafaty ireo mpandeha rehetra 18 nentiny.
Hitan'ireo tanora izay nilalao ranomandry ny Alatsinainy maraina ny sisan'ilay fiaramanidina an'ny fitaterana Nepal Airlines an'ny fanjakana izay tsy hita taorian'ny 1 ora folakandro oran'i Nepal (NST) tamin'ny Alahady teo, araka ny nolazain'ny Setopati, gazety amin'ny aterineto Nepali. Mety ho nandona tendrombohitra ilay fiaramanidina ka izay no nahatonga ny fianjerany.
Toerana nianjeran'ny (#planecrash) 9N-ABB an'ny #NAC. 2 KM andrefan'ny tempolin'i SupaDeurali any amin'ny disrtikan'i #Arghakhanchi, afovoany andrefan'i #Nepal. pic.twitter.com/uOGSbL6DPf
Toy izao ny bitsik'i Medico, dokotera mpitsabo avy amin'ny Inovntoerana Ffianarana ho Mpitsabo (IOM) :
Vaovao mampalahelo. Izay tsy noheverina hitranga no niseho. Maty daholo ireo mpandeha 18 nentin'ilay fiaramanidin'ny Fitaterana Nepal Airlines .
Nobitsihin'ilay mpanao gazety, Bhabasagar Ghimire, ny sarin'ilay fiaramanidina taloha :
Nitondra marary avy any amin'ny seranam-piaramanidin'i Jumla ho any Nepalgunj io fiaramanidina io tamin'ny 24 Aprily 2010.
43 taona ilay fiaramanidina ary nitondra mpandeha 15 sy mpanamory 3 raha ny filazan'ny bilaogy Mysansar. Isan'izany ankizy iray sy teratany Danoa iray. Efa voalahatra tsy ho azo ampiasaina intsony io fiaramanidina io amin'ity 2014 ity.
Nibitsika avy any Alemaina i Rajan Bhattarai :
Mampalahelo ny mandre fianjerana #planecrash hafa indray any #Nepal. Fiaramanidin'ny NAC 43 taona -mamintina ny tantara saingy ho an'ny andro ratsy sy ny mpanamory ny tsiny
Tena ratsy ny andro tany an-toerana tamin'ny fotoana nianjeran'ilay fiaramanidina :
Izay nanome alàlana ny hisidinan'iny fiaramanidina iny anaty toetrandro tahaka izany no tokony hampidirina am-ponja.
Na dia efa antitra aza ilay fiaramanidina dia zavatra tsy nampoizina iray ihany no niseho taminy tamin'ny nisosany tamin'ny làlana tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Jumla tamin'ny 25 Jona 1992. 40 taona lasa izay, nahodin'ny mpiasan'ny kongresy handrobàna 30 lakhs roupie indiana ( tokony ho 4.800 dolara Amerikana) izay nentiny ihany koa io fiaramanidina io, araka ny tatitra nataon'ny Mysansar.
Betsaka ny lozam-piaramanidina teo amin'ny fitaterana an'habakabaka Nepale tato anatin'ny taona vitsivitsy, fianjerana fiaramanidina mahatsiravina roa isan-taona no hita nanomboka tamin'ny 2010 ka hatramin'ny 2012. Tsy navelan'ny Firaisam-be Eoropeana hisidina any amin'ireo firenena Eoropeana 28 ireo fiaramanidina rehetra avy any Nepal.
Maherin'ny 700 ny olona maty hatramin'ny 1949 #PlaneCrash#Nepal
Tondraky ny vaovao momba ilay loza sy hafatra fitsapana alahelo ny haino aman-jery sosialy. Nibitsika ny Praiminisitra teo aloha Baburam Bhattarai hoe :
Taitra sy nalahelo mafy aho tamin'ny fianjeran'ny fiaramanidin'ny NAC sy ny fahafatesana olona 18. Mampionona amin'ny foko manontolo ireo fianakaviana nozohim-pahoriana aho !
Nibitsika i Pyasi :
[Izao no nolazain-dry zareo] mila herim-po be dia be raha hihanika ny Tendrombohitra Everest, fa ohatra ny mila herim-po avo arivo heny raha hitaingina fiaramanidina Nepale.
Fehiny, mbola mampatahotra ny mandeha amin'ny fitaterana an'ahabakabaka Nepale noho ny fisian'ireo lozam-piaramanidina tato ho ato.